China Fiberglass fantsona fanamboarana sy orinasa | Yan Tuo
Ny vokatra fiberglass dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiberglass sy ny resina eo ambanin'ny maripana ambony. Ny hateviny dia ampahefatry ny vy fotsiny, ary ny roa ampahatelon'ny an'ny aluminium.
Azontsika atao ny mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny halavany sy savaivon'ny fantsona fibre karbaona. Ny halavany dia mety hatramin'ny folo metatra ary ny savaivony dia mety hahatratra 500mm. Ary aorian'ny fizotry ny famokarana mandroso sy ny fifehezana kalitao henjana dia afaka mamokatra vokatra avo lenta isika.
Fananana mombamomba ny FRP
1. fanoherana ny harafesina:
Ny vokatra dia mahatohitra ny fahasimban'ny entona sy ny ranon'ny asidra, alkaly, sira ary solvent organika mba hahafahan'izy ireo misoroka ny olan'ny vy tsy maharatsy sy ny hazo lo.
2. Mavesatra maivana ary avo be:
Ny vokatra fiberglass dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiberglass sy ny resina eo ambanin'ny maripana ambony. Ny hateviny dia ampahefatry ny vy fotsiny, ary ny roa ampahatelon'ny an'ny aluminium. Fa ny hamafiny dia avo folo heny noho ny an'ny PVC, mihoatra ny vokatra aliminioma ary mahatratra ny haavon'ny vy karbaona iraisana. Noho ny lanjany maivana, ny vokatra dia mitaky fanampiana kely kokoa ary manana ny fiasa mora apetraka sy vidiny ambany.
3. Retarding mampihetsi-po:
Ny index oksizenina mahazatra an'ny vokatra fiberglass mahazatra dia mihoatra ny 32 (araka ny GB8924). Amin'ny alàlan'ny famolavolana, ny mari-pahaizana miparitaka amin'ny alàlan'ny vokatra ethylene retarding avo lenta dia ambany 10, izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanoherana ny afo ho an'ny fiarovana.
4. fanoherana ny fifandonana sy fanoherana ny harerahana:
Ny vokatra fiberglass dia afaka manohitra ny fifandonana ary mitazona ny endrika tany am-boalohany aorian'ny famoritana miverimberina mba hampiasaina toy ny lohataona.
5. fanoherana taona:
Ny faharetana maharitra dia 20 taona mahery. Ny valin'ny fikarohana dia mampiseho fa ny hamafiny dia mbola hitazona maherin'ny 85% aorian'ny 20 taona nisehoan'ny atmosfera.
6. fisehoana tsara sy fikojakojana mora:
Ny lokon'ny vokatra vita amin'ny fiberglass dia afangaro amin'ny resina mba hamirapiratra sy sarotra hanjavona. Tsy ilaina ny sary hosodoko izay madio aorian'ny fisasana.
Fampiharana fantsona FRP
afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa, ary azo ampiasaina amin'ny faritra malemy mando, faritra loessible, faritra farihy ary faritra afovoan'ny simika simika, sns. Izy io dia mandray ny fitambaran-ondana ondana fantsona ary mandrafitra fantsona multilayer. Izy io koa dia mety ho fantsom-piarovana rehefa miampita ny tetezana na ny renirano ny tariby.
1. Tetikasa fananganana sy fanavaozana ny taratra herinaratra an-tanàn-dehibe.
2. Tetikasa fanavaozana ny tanàna.
3. Ny fananganana seranam-piaramanidina fiaramanidina sivily.
4. Valan-javaboary indostrialy, fananganana vohitra.
5. Fanamboarana injeniera amin'ny arabe sy ny tetezana.
Teo aloha: Tsorakazo fanjonoana OEM